Ɛhe na Awufo Wɔ? - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
5 Yehowa, nea ɔbɔɔ amemene no, nim tebea a sɛ yewu a yɛkɔ mu. Onim nokware no, na wakyerɛkyerɛ tebea a awufo wom no mu wɔ N’asɛm Bible mu. Nea Bible nkyerɛkyerɛ a emu da hɔ fann ka ni: Sɛ onipa wu a, onni baabiara bio. Owu yɛ nkwa abirabɔ. Awufo nhu ade, wɔnte asɛm, ɛnna wonnwen nso. Yɛn nipadua fã biara gyae adwuma yɛ bere a yɛawu no. Ɔkra anaa honhom bi a enwu da nhyɛ yɛn mu.*
8 Mfitiase no, so na ɛyɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nnipa bewu? Dabida! Yehowa bɔɔ nnipa sɛ wɔntra ase daa. Sɛnea yɛadi kan asua ho ade wɔ nhoma yi mu dedaw no, Onyankopɔn de nnipa baanu a wodi kan no kɔtraa paradise bi a emu yɛ anigye mu. Ɔmaa wɔn apɔwmuden a ɛfata. Adepa nkutoo na na Yehowa pɛ sɛ wonya. So ɔwofo bi a ɔwɔ ɔdɔ wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ne mma hu nkwakoraabɔ ne mmerewabɔ mu amane na wowu? Dabida! Ná Yehowa dɔ ne mma no, na na ɔpɛ sɛ wonya anigye a enni awiei wɔ asase so. Bible ka wɔ nnipa ho sɛ: “[Yehowa de] bere a enni awiei ahyɛ wɔn komam.” (Ɔsɛnkafo 3:11, NW ) Onyankopɔn de ɔpɛ a ɛne sɛ yɛbɛkɔ so atra ase daa hyɛɛ yɛn mu bere a ɔbɔɔ yɛn no. Na wayɛ nhyehyɛe a ɛbɛma yɛakɔ so atra ase daa.
9 Ɛnde, dɛn nti na nnipa wu? Nea ɛbɛyɛ na yɛanya mmuae no, ɛsɛ sɛ yesusuw asɛm bi a esii bere a na ɔbarima biako ne ɔbea biako pɛ na wɔwɔ asase so no ho. Bible kyerɛkyerɛ mu sɛ: “[Yehowa, NW ] Nyankopɔn maa nnua ahorow nyinaa a wɔhwɛ a, ɛyɛ fɛ, na eye sɛ wodi fifii asase no so.” (Genesis 2:9) Nanso, na anohyeto biako wɔ hɔ. Yehowa ka kyerɛɛ Adam sɛ: “Turom ha nnua nyinaa, di bi. Na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ, nni, ɛfiri sɛ da a wobɛdi bie no, wuo na wobɛwuo.” (Genesis 2:16, 17, Asante Twi Bible) Ná saa ahyɛde yi so di nyɛ den. Na nnua foforo pii wɔ hɔ a na Adam ne Hawa betumi adi n’aba no bi. Nanso, afei na wɔanya hokwan soronko a wɔde bɛda anisɔ a wɔwɔ ma Onii a na wama wɔn biribiara a wohia a nkwa a ɛyɛ pɛ ka ho no adi. Osetie a na wɔbɛyɛ no nso bɛkyerɛ sɛ wobu wɔn soro Agya no tumidi, na wɔpɛ n’akwankyerɛ a ɔdɔ wom no.
* Sɛ wopɛ nsɛmfua “ɔkra” ne “honhom” ho nkyerɛkyerɛmu a, hwɛ Nkekaho no.